Nwere ike iwepụtakwu oge iji jikwaa data karịa azụmaahịa | Martech Zone
Nyaahụ, m kesara otu anyị siri buru otu afọ niile nke mmelite mmekọrịta mmadụ. Ọ bụ ezie na obere ọrụ wee banye nyocha ahụ, ndị otu anyị jiri ọtụtụ awa were naanị ịhịa data ahụ wee mee ya faịlụ enwere ike ibugo. Ọbụna mgbe anyị gafesịrị akwụkwọ nkwado niile, anyị ga-eji aka anyị gafee ma họrọ ma ọ bụ tinye mgbasa ozi iji gosipụta na mmelite mmekọrịta ọ bụla. O were otutu awa iji degharịa ya ma mezie ya.
Taa, ejiri m oge m were oge ole na ole wee webata ha na saịtị WordPress nke nwere njikwa ihe omume ọkachamara. O di nwute, n'agbanyeghi otutu nkpu na ogwu nile tinyere na sistemu a, o ka tukwasiri obi na mmadu noo n'ihu keyboard nke juputara ihe omuma obula ma mejuputa udiri ihe omume obula. O were ụbọchị niile.
N'ihe atụ abụọ a, data dịcha ma dị na faịlụ data eji arụ ọrụ. N'okwu a, ha abụọ bụ ederede ederede ahapụrụ iche. Agbanyeghị, nyiwe Martech abụọ nwere oke mmachi na ikike ntinye data ha. Oge na oge, nke a bụ okwu gbasara Martech. Anyị nwere ngwaọrụ niile dị iji rụọ ọrụ mkpọsa nwere mmetụta, mana ọtụtụ mgbe anyị na-ahụ ikike mbubata na mwepu na-adịghị adị ma ọ bụ nke na-adịghị adị.
Anọghị m naanị m na iwe. N'ime nnyocha na-adịbeghị anya nke Councillọ Ọrụ Ahịa Martech, mmekọrịta ịhụnanya / ịkpọasị ya na Martech na-agbanwe maka ndị na-ere ahịa.
N'adịghị ka ndị ibe B2C ha, ndị na-ere ahịa B2B nwere data karịa mgbe ọ bụla, mana enweghị ike ijide ya iji mara ndị ahịa ha n'ụzọ ga-enyere ha aka ire ahịa nke ọma.
Doug Bewsher, Ebute ụzọ CEO
Dị ka Nyocha
85% nke ndị ahịa kwuru na ha bụ na-etinye oge dị ukwuu karịa mgbe ijikwa ahịa teknụzụ, na ego nke iwepụta oge ka mma ịzụ ahịa na isoro ndị ahịa na-emekọrịta ihe.
98% nke ndị na-ere ahịa kwuru na ha chọrọ ozi ndị ọzọ banyere ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ dị na ọdụ data ha.
60% nke ndị na-ere ahịa na-arịọ maka ezi nghọta nke onye na-azụ ahịa na mmadụ nwere ike ịzụta.
Ihe karịrị 75% nke ndị ahịa ahịa e nyochara kwuru na ha ga-ahọrọ karịa gbue oge na-emepe emepe ma na-ebupụta mkpọsa ọhụrụ na naanị 11% kwuru na ha chọrọ iji ụbọchị ọrụ ha ijikwa ọdụ data ha.
Ọ bụ ezie na ndị ahịa ahụ nyochara kwuru na ha maara ijikwa data ha dị oke mkpa maka ihe ịga nke ọma, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu kwetara na ha na-etinye obere oge dị ka o kwere mee na-emeso ya. Ndị na-ere ahịa na-achọ ụzọ ha ga-esi mee ka data na ọgụgụ isi ọgụgụ isi rụọ ọrụ ma jiri ya mee ka ebumnuche ha bụ isi - nke nyocha ahụ gosipụtara dị ka ahịa na-akwado site na ị nweta ndu ruru eru.
Leadspace's Audience Management Platform na-enyere ndị ụlọ ọrụ B2B aka ịba ndị ahịa mma ma mee ka ha too ngwa ngwa site na ikwe ka ndị na-ere ahịa chọta ma mara ndị na-ege ha ntị. Dika data nke di n'ime na nke ndi ozo na-abawanye, Leadspace jiri AI iji nye otu isi iyi nke eziokwu n'ofe ahia na ahia ahia nile, choputa akuko ohuru na ndi mmadu, ma kwado oru ahia kachasi. Emelitere na ezigbo oge, data na ọgụgụ isi na-anọgide na-ezi ezi ma na-arụ ọrụ ma nwee ike iji ya gafee ahịa, ahịa, na ọwa mgbasa ozi.
Tags: datandunyocha ahịateknụzụ ahịankataCouncillọ Ọrụ Ahịa MartechNyocha Martech
Apr 18, 2017 na 1: 29 AM
Idozi data ahụ ekwesịghị iwere gị ụbọchị niile, ọ bụkwa ihe ịrịba ama na ị na-arụ ọrụ na obere foto kama iji nnukwu foto na azụmahịa gị. (M na-ahụ nke a n'ihi na ọ na-egbukwa m.) Idozi na data kwesịrị ime a ole na ole mgbalị na fiverr ma ọ bụ onye ọ bụla na-edozi ya maka a nominal ego tụnyere ihe oge gị bara uru. Ana m ede ihe a iji chetara onwe m. Ị maara ka esi edozi ya, onye ọzọ rụrụ ọrụ ahụ "naanị" ị maara ka ị ga-esi gwa ha ka ha mee ma kwụọ ha ụgwọ ihe ha jụrụ, ọ bụghị egwuregwu ihere. Abụ m onye kacha njọ n'ime nkwusa m. (M nwere ike ime ya nke ọma mgbe niile, ma ọ bụ naanị m maara ka esi eme ya….)
Apr 18, 2017 na 10: 57 AM
Meh. Ekwetaghị m na nke a bụ eziokwu Kevin. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịwepụta ọrụ nkịtị, àgwà na atụmatụ enweghị ike ịpụta. Ọbụna n'ihe atụ ndị m nyere, ịmara nnukwu foto na onye ahịa bụ ihe chọrọ ka m mee ka m dezie data m nwere.